အောက်တိုဘာလ 2013 |4၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
အများစုကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ် | ကျနော်တို့လူငယ်ကဏ္ဍ Are
wearebroadcasters.com ထုတ်လွှင့် t.co/r6YHoNKzECSee အမျိုးသားအစည်းအရုံး
အခုတော့ Autodesk ချိန်း Apps ကပ Store တွင် Remote Desktop Streamer App ကို | အတိုကောက်အွန်လိုင်း
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က Splashtop, remote desktop software ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, t ကိုအပေါ် "Remote Desktop Streamer App ကို" ဖွင့်ဖို့ Autodesk အတူလက်တွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ... acronymonline.org အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
သငျသညျဒေတာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်လာမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့မ - Majenta
www.majentasolutions.com အပေါ် t.co/DxQQjPMiVRSee: မန်နေဂျာထံမှအင်ဂျင်နီယာများမှ, ဒီဇိုင်နာများမှလူတိုင်း Pro ကို #Vault နှင့်အတူဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အစောပိုင်းကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်
script ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကာစ်တင်နှင့်တည်နေရာ: AfterDeath ၏လုပ်ခြင်း (အပိုင်း 2)
Gez Medinger, AfterDeath ၏တွဲဖက်ဒါရိုက်တာနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အင်တာဗျူး၏ဤဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ script ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, တည်နေရာနဲ့သေးငယ်တဲ့ ensemble feature ကို ချ. များ၏အခက်အခဲကိုဖုံးလွှမ်း။ AfterDeath လက်ရှိ Post-ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖို / ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်နှင့် Medinger နဲ့ Robin Schmidt ကကပူးတွဲညွှန်ကြားခဲ့သည်။ Medinger နှင့် Schmidt ကနှစ်ဦးစလုံးဟာအတိတ်များအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြပေမယ့် ...
လင်ကွန်းစင်တာရှိဂျက်ဇ်ဂီတတွင် LG G2 ထုတ်ကုန်စတင်ရန် WorldStage မှ AV အထောက်အပံ့ပေးသည်
LG Electronics ၏က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆက်ပြသသောအခါ, LG က G2, အဖရက်ဒရစ်ပီနှင်းဆီခန်းမ, လင်ကွန်းစင်တာ၌ဂျက်ဇ်ဂီတ၏အိမျ၌မီဒီယာကြွယ်ဝသောတင်ဆက်မှု, WorldStage ၏ AV စနစ်ကျွမ်းကျင်မှုကထောက်ခံခဲ့သည်။ WorldStage [ ... ] 700 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်နီးပါး 30 ဧည့်သည်များ LG ရဲ့အဘို့အဆုံဘယ်မှာဂျက်ဇ်ဂီတ, များအတွက်သီးသန့် AV စနစ်ရောင်းချသူဖြစ်ပါသည်
အောက်တိုဘာ 31 ၏အပတ်အရောင်းခေါ်ရန် - နိုဝင်ဘာ 7, 2013
TuneIn 100,000 ဘူတာတာမျိုးနှင့် KIRX-Am / KRXL-FM ရေ consoles စဘို့ Audioarts ကိုရွေးပါ။
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏အသငျး (SMPTE), အဆိုကိုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးဆောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ SMPTE အဖွဲ့ဝင်များကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 64 နိုင်ငံများတွင်တစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ကျော် ... www.flickr.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ